९ कक्षा उत्तिर्ण गर्दै नायिका करिश्माले भनिन् ‘९ पास गरे एसइइ अझै राम्राे गर्छु’ (भिडियाेसहित)
चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरले भर्खरै कक्षा ९ पास गरेकी छिन् । यस सँगै उनले कक्षा १० मा अझै मेहनत गरेर राम्राे अंक्का साथ एसइइ परिक्षा पास गर्ने संकल्प समेत गरेकी
गतवर्ष यति बेला हामी निर्णायक अवस्थामा थियौं । गणतन्त्र संस्थागत गर्न कैयन् चुनौतिमाझ तपाईले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ वर्ष २०७४ को ? २०७४ साल अविस्मरणीय वर्षको
धुर्मुस र रबि पहिलो पटक एक साथ मिडियामा (पुरा दृश्य र अन्तरवार्ता सहीत) देशका चर्चित दुई अनुहारहरु सिताराम कट्टेल ।।।धुर्मुस’ र रबि लामिछाने आज एका बिहानै पोखरामा भेटीए । उनीहरु
शिल्पा पोख्रेल ले छबि ओझाको बिषयमा बोल्न किन मानिनन ?आउनुष हेर्नुहोस पुरा अन्तरवार्ता भिडियो मा .
निर्माता छबि राज ओझा र नायिका शिल्पा पोख्रेलको सम्बन्धको बारेमा थाहा नहुने सायद कमै होलान । तर पनि केहि समय अगाडी छबि र शिल्पाको बिहे हुने पक्का पक्कि भैसकेको कुरा
हाँस्य क्षेत्रमा परिचित नाम हो दीपाश्री निरौला । उनलाई हक्की स्वाभावकी कलाकार भनेर पनि चिनिन्छ । रेडियो कार्यक्रम धनियाकी दुनियाबाट हाँस्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी दीपाश्रीले अहिले पनि त्यो कार्यक्रम चलाउँदै